Zute Arirang 151, Android nke North Korea | Androidsis
Zute Arirang 151, gam akporo nke North Korea
North Korea enwetala aha na -agbagha agbagha maka ọchịchị aka ike ya na njikwa ọ na -amanye ụmụ amaala ya ọ bụla. Mana ọ dị mma, n'agbanyeghị nke a, iji ekwentị, n'agbanyeghị na ọ na -ebelata site na enweghị nzuzo nke ndị bi na ya nwere, abụghị ihe efu, ọ bụkwa ya nwere ekwentị gam akporo -ee, dị ka ọ dị, gam akporo!- akpọrọ Arirang 151.
Ngwa a na -arụ ụdị gam akporo 4.4.2 Kitkat gbanwere nke ukwuu, ọ bụ na, n'ụzọ doro anya, nke a bụ ka ijigide njikwa nke ndị ọrụ ya, nke gọọmentị North Korea nwere ọtụtụ ohere ịnweta data nke ekwentị ọ bụla. Bụlagodi, Arirang 151 nwere atụmatụ ruru ekwenti. Anyị na-agwa gị karịa!
Arirang 151 Atụmatụ
Ngwa a na -abịa vidiyo nkwado ihe ruru 500MB, na mgbakwunye na ụdị gam akporo 4.2.2 Kitkat, dịka anyị kwuru na mbụ, yana ọtụtụ egwuregwu dịka Super Mario, Angry Birds, Cut the Rope na ngwa ndị na -atọ ụtọ dịka AppLock, n'etiti ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, Ngwaọrụ a bidoro n'afọ 2016, wee jikọta batrị 2.500mAh, igwefoto isi 13MP, ihuenyo HD 1280-inch (mkpebi 720 x 5). Ọ nwekwara Bluetooth, njikọ 3G, Wi-fi, ebe nchekwa dị n'ime nke 4GB gbasaa site na kaadị microSD 32GB na oghere maka micro SIM.
Banyere akụkụ ya, ọ tụrụ 143mm elu x 70mm obosara x 7.65mm, ma tụọ gram 148.
Arirang 151 na -ejikọ ngwa AppLock maka 'nzuzo'
Ekwuru nke ọma na North Korea na -emepụta ya, n'agbanyeghị na a na -ekwukwa na ha na -eme ya na China wee bupụ ya. Eziokwu bụ Ndị North Korea enweghị oke nzuzo na ekwentị ha dịka ha ga -achọ, ma ọ bụ dịka anyị na -eme.
Anyị chọrọ ịma ihe ị chere maka nke a, na maka nke a, anyị na -ahapụrụ gị nyocha: Gịnị ka ị chere gbasara ekwentị a? Ị chere na n'ihi ngwa AppLock nke o nwere, ha nwere ihe nzuzo? Ka ọ bụ naanị echiche ụgha nke nzuzo ka gọọmentị na -enye ụmụ amaala ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Zute Arirang 151, gam akporo nke North Korea
LG V30 malitere inweta mmelite na gam akporo Oreo